The Fabulous Worlds Most Luxurious Jet!
Posted by: site admin @ 11:01 pm
of us have to fly economy whilst some of us are lucky enough to fly in
first class, but for those that really want to travel in style there is
the Skyacht One,aprivate jet that is staking its claim as the
world’s most luxurious private jet. The Skyacht One is the end result of
a partnership between Embraer an SottoStudios Design, based on
Embrarer’s very own flagship Lineage 1000E jet.
world’s most luxurious jet come equipped with? onboard you’ll find a
cocktail bar, oversized comfy beds,abathroom and shower finished to an
incredibly high standard and evenaconference room finished in the
same classy style you’d find onaclassic 1930’s yacht.
level of detail however that has gone into the finishings and
furnishings of the jet that earn it it’s ‘most luxurious’ status. From
the brass inlaid window bezels to the mahogany wood cabin throughout
just about every handle and rail is ever brass or gold.
Classical မြန်မာ (ဗမာ)1961 Fri Aug 19 2016 Buddha anigif3.gif animated buddha photo: Animated Buddha BuddhaMed.gif animated buddha photo: Animated Buddha BUDDHA.gif LESSONS from Rector JCMesh J Alphabets Letter Animation ClipartMesh C Alphabets Letter Animation Clipart an expert who identifies experts influenced by Expert and Infulencer Sashikanth Chandrasekharan of Free Online Awaken One With Awareness Mind (A1wAM)+ ioT (insight-net of Things) - the art of Giving, taking and Living to attain Eternal Bliss as Final Goal through Electronic Visual Communication Course on Political Science -Techno-Politico-Socio Transformation and Economic Emancipation Movement (TPSTEEM). Struggle hard to see that all fraud EVMs are replaced by paper ballots by Start using Internet of things by creating Websites, blogs. Make the best use of facebook, twitter etc., to propagate TPSTEEM thru FOA1TRPUVF. Practice Insight Meditation in all postures of the body - Sitting, standing, lying, walking, jogging, cycling, swimming, martial arts etc., for health mind inahealthy body. from INSIGHT-NET-Hi Tech Radio Free Animation Clipart Online A1 (Awakened One) Tipiṭaka Research & Practice University in Visual Format (FOA1TRPUVF) free online university research practice upalevel revolving globe TO http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/globe08_e0.gif Dove-02-june.gif (38556 bytes) through upalevelhttp://sarvajan.ambedkar.orgupalevel https://awakenmediaprabandhak. wordpress.com/ Button Plant Green Butterfly E Mail Animation Clip buddhaa1dhamma@gmail.com jchandra1942@icloud.com sarvajanow@yahoo.co.in is the most Positive Energy of informative and research oriented site propagating the teachings of the Awakened One with Awareness the Buddha and on Techno-Politico-Socio Transformation and Economic Emancipation Movement followed by millions of people all over the world in 105 Classical languages. Rendering exact translation asalesson of this University in one’s mother tongue to this Google Translation and propagation entitles to becomeaStream Enterer (Sottapanna) and to attain Eternal Bliss asaFinal Goal https://in.pinterest.com/pin/354377064398763396/ for language scripts http://www.buddha-vacana.org/sutta/digha.html http://sarvajan.ambedkar.org/?p=3362 http://sarvajan.ambedkar.org/?m=201208 http://sarvajan.ambedkar.org/?m=201305 http://sarvajan.ambedkar.org/?p=2256 http://sarvajan.ambedkar.org/?m=201308 https://www.youtube.com/watch?v=tMUpGcWH-74&list=RDtMUpGcWH-74#t=0 for Section 25- Charnel ground https://www.youtube.com/watch?v=TlGRJ9IUf-c&list=PLOdaxMCxlGtWxXD8ISM70eNN3bIaWFrzT https://www.youtube.com/watch?v=KGz7mYUrSl0&list=PLOdaxMCxlGtWxXD8ISM70eNN3bIaWFrzT&index=5 for Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Pali) -5Kāyānupassanā paṭikūlamanasikārapabbaṃ- 05:39 mins https://www.youtube.com/watch?v=1d-hpMej9bQ for Chinese Buddha Chants - Best for Meditation-29:45 mins https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1563cc0d51280c12
Classical မြန်မာ (ဗမာ)1961 Fri Aug 19 2016
Dhammādāsaṃ nāma dhamma-pariyāyaṃ desessāmi, yena samannāgato ariyasāvako ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byā-kareyya: ‘khīṇa-nirayo-mhi khīṇa-tiracchāna-yoni khīṇa-pettivisayo khīṇ·āpāya-duggati-vinipāto, sotāpanno-hamasmi avinipāta-dhammo niyato sambodhi-parāyaṇo’ ti.
Katamo ca so, Ānanda, dhammādāso dhamma-pariyāyo, yena samannāgato ariyasāvako ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byā-kareyya: ‘khīṇa-nirayo-mhi khīṇa-tiracchāna-yoni khīṇa-pettivisayo khīṇ·āpāya-duggati-vinipāto, sotāpanno-hamasmi avinipāta-dhammo niyato sambodhi-parāyaṇo’ ti?
Idh·ānanda, ariyasāvako Buddhe aveccappasāda samannāgato hoti:
Ayaṃ kho so, Ānanda, dhammādāso dhamma-pariyāyo, yena samannāgato ariyasāvako ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byā-kareyya: ‘khīṇa-nirayo-mhi khīṇa-tiracchāna-yoni khīṇa-pettivisayo khīṇ·āpāya-duggati-vinipāto, sotāpanno-hamasmi avinipāta-dhammo niyato sambodhi-parāyaṇo’ ti
Sato, bhikkhave, bhikkhu vihareyya sampajāno. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī.
Katha·ñca, bhikkhave, bhikkhu sato hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhu
Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu sato hoti. Katha·ñca, bhikkhave, bhikkhu sampajāno hoti? Idha, bhikkhave,
abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti, ālokite vilokite
sampajānakārī hoti, samiñjite pasārite sampajānakārī hoti,
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti, asite pīte khāyite sāyite
sampajānakārī hoti, uccārapassāvakamme sampajānakārī hoti, gate ṭhite
nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
– Sabbaphāliphullā kho, Ānanda, yamakasālā akālapupphehi. Te
tathāgatassa sarīraṃ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti tathāgatassa pūjāya.
Dibbānipi mandāravapupphāni antalikkhā papatanti, tāni tathāgatassa
sarīraṃ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti tathāgatassa pūjāya.
Dibbānipi candanacuṇṇāni antalikkhā papatanti, tāni tathāgatassa sarīraṃ
tūriyāni antalikkhe vajjanti tathāgatassa pūjāya. Dibbānipi saṅgītāni
antalikkhe vattanti tathāgatassa pūjāya.
Na kho, Ānanda, ettāvatā Tathāgato sakkato vā hoti garukato vā mānito vā pūjito vā apacito vā. Yo kho, Ānanda, bhikkhu vā bhikkhunī vā upāsako vā upāsikā vā dhammānudhammappaṭipanno viharati sāmīcippaṭipanno anudhammacārī, so Tathāgataṃ sakkaroti garuṃ karoti māneti pūjeti apaciyati, paramāya pūjāya. Tasmātih·ānanda, dhammānudhammappaṭipannā viharissāma sāmīcippaṭipannā anudhammacārin·oti. Evañ·hi vo, Ānanda, sikkhitabba nti.
– ‘Siyā kho pan·ānanda, tumhākaṃ evam·assa: ‘atīta-satthukaṃ pāvacanaṃ, natthi no satthā’ ti. Na kho pan·etaṃ, Ānanda, evaṃ daṭṭhabbaṃ. Yo vo, Ānanda, mayā Dhammo ca Vinayo ca desito paññatto, so vo mam·accayena satthā.
‘இதிபி ஸொ பகவா அரஹங் ஸம்மாஸம்புத்தொ விஜ்ஜாசரணஸம்பனொ ஸுகதொ லோகவிது அனுத்தரொ புரிஸதம்மஸாரதி ஸத்த தேவமனுசானங் புத்தொ பகவா,தி.
தம்மா-பரியாயங், யேன ஸம்மன்னாகதொ ஆரியஸாவகொ ஆகன்கமானொ அட்டணாவ அட்டாணங்
ப்யா - கரெய்ய: கின-நிரயோ-மி கின-திர்ச்சான-வொனி
கின-பெட்டிவிசவொ கின் அப்பாவ-துக்கதி-வினிபாதொ, ஸோதாப்பன்னொ - ஹமஸ்மி அவினிபாதொ-தம்மொ நியதொ ஸம்போதி பரயனொ’தி.
கதமொ ச ஸொ, ஆனந்தா,
தம்மாதாஸொ தம்மா-பரியாயவொ, யேன ஸம்மன்னாகதொ ஆரியஸாவகொ ஆகன்கமானொ
அட்டணாவ அட்டாணங் ப்யா - கரெய்ய: கின-நிரயோ-மி கின-திர்ச்சான-வொனி
கின-பெட்டிவிசவொ கின் அப்பாவ-துக்கதி-வினிபாதொ, ஸோதாப்பன்னொ - ஹமஸ்மி
அவினிபாதொ-தம்மொ நியதொ ஸம்போதி பரயனொ’தி?
இத்’ஆனந்தா, ஆரியஸாவகொ புத்தே அவெச்சப்பஸாத ஸம்மன்னாகதொ ஹோதி
‘இதிபி ஸொ பகவா அரஹம் ஸம்மாஸம்புத்தொ விஜ்ஜாசரனொஸம்பன்னொ ஸுகதொ லோகவிது அனுத்தரொ புரிஸதம்மஸாரதி ஸத்தா தேவமனுஸ்ஸானம் புத்தொ பகவா’தி.
பகவதொ ஸாவகச்ங்கொ, உஜ்ஜுபதிபன்னொ பகவதொ ஸாவகச்ங்கொ, ஞாயபதிபன்னொ பகவதொ
ஸாவகச்ங்கொ, ஸாமிசிதிபன்னொ பகவதொ ஸாவகச்ங்கொ, வாதிதம் சத்தாரி
புரிஸவுக்கானி, ஏஸ பகவதொ ஸாவகச்ங்கொ, ஆஹுனெய்யொ பாஹுனெய்யொ அன்ஞலிகாரனியொ
அனுத்தரம் புண்யக்கேதம் லோகஸ்ஸ’தி.
யங் கொ ஸொ,ஆனந்தா,தம்மதாஸொ தம்மா-பரியாயொ, வென ஸம்மன்னாகததொ ஆரியஸாவகொ
ஆக்கன்கமானொ அட்டனாவ அட்டானம் ப்வா-கரேவ்வா ‘
நிவதொ ஸம்போதி-பராயனொ’ தி
ஸதொ, பிக்காவெ, பிக்கு விஹாரெய்ய ஸம்பஜனொ அ யங் வொ அமாக்ஹம் அனுஸாஸனி.கதான்யச, பிக்காவெ, பிக்கு ஸாதொ ஹோதி? இதா, பிக்காவெ, பிக்கு
ஆனந்தா, எத்தவதா ததாகதொ ஸக்கதொ வ ஹோதி கருகதொ வ மானிதொ வ பூஜிதொ வ அபசிதொ
வ. யொ கொ. ஆனந்தா, பிக்கு வ பிக்குனி வ உபாஸகொ வ உபாஸிகா வ
தம்மனுதம்மாபதிபன்னொ விஹாரதி ஸாமிசிபதிபன்னொ அனுதம்மாசாரி, ஸொ ததாகதம்
ஸக்கரொதி கரும் கரோதி மானதி பூஜேதி அபசிவதி பரமாய பூஜெய. தஸ்மாத்ஹி ஆனந்தா,
தம்மனுதம்மாபதிபன்னா விஹாரிஸாம ஸாமிசிபதிபன்னா அனுதம்மாசாரி’னோதி.
ஏவன்ஹி வொ ஆனந்தா, ஸிக்ஹிதப்ப நிதி.
1961 Fri Aug 19, 2016
ကာတွန်းမြတ်စွာဘုရားဓာတ်ပုံ: Animated ဗုဒ္ဓ BuddhaMed.gif
ကာတွန်းမြတ်စွာဘုရားဓာတ်ပုံ: Animated ဗုဒ္ဓ BUDDHA.gif
JCMesh J ကို alphabet ပေးစာ Animation ရဲ့ ClipartMesh ကို C အက္ခရာပေးစာ Animation ရဲ့ Clipart
(အရာ၏ထိုးထွင်းသိမြင်-ပိုက်ကွန်ကို) နဲ့အတူတစ်ခုမှာနိုးထ လွတ်မြောက်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (TPSTEEM) ။
အားလုံးလိမ်လည်မှု EVMs အားဖြင့်စက္ကူမဲဖြင့်အစားထိုးကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်ခက်ခဲရုန်းကန်
, ဘလော့ဂ်များ Website များအတွက်အမှုအရာများကိုအင်တာနက်သုံးပြီးစတင်ပါ။ facebook ရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Make, etc Twitter, FOA1TRPUVF thru TPSTEEM ပြန့်ပွားရန်။
ရပ်နေမုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေး, စက်ဘီးစီးခြင်း, ရေကူး,
ချိုးငှက်-02-june.gif (38556 bytes)
တစ်ဦး levelhttp ထ: တစ်အဆငျ့ //sarvajan.ambedkar.orgup
rendering နဲ့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ Stream Enter (Sottapanna)
ဘာသာစကား script များ
ပုဒ်မ 25- Charnel မြေပြင်
Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (ပါဠိ) -5Kāyānupassanāpaṭikūlamanasikārapabbaṃ- 05:39 မိနစ်
တရုတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသီချင်း - တှေးတောဆငျခွ-29 များအတွက်အကောင်းဆုံး: 45 မိနစ်
PoṭṭhapādaSaññā၏သဘောသဘာဝ reagrding အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းများကိုမေး၏။
အခုတော့သခင်, အမြင်ပထမဦးဆုံးထနှင့်အသိပညာပြီးနောက်ပါဘူး, သို့မဟုတ်အသိပညာပထမဦးဆုံးထနှင့်အမြင်ပြီးနောက်ပါဘူး, သို့မဟုတ်အမြင် & အသိပညာတစ်ပြိုင်နက်တည်းပျေါပေါကျသလဲ?
Potthapada, အမြင်ပထမဦးဆုံးပေါ်ထွန်းနှင့်အသိပညာပြီးနောက်။ ထိုအသိပညာ၏ပေါ်ထွက်လာသောအသညာ၏ပေါ်ပေါက်မှလာ။ တစျခုမှာ ‘’ ဒါဟာငါ့ပညာအတတ်ပျေါထှနျးသိရသည်သောဤအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းရဲ့။ ‘, တို့ကိုသိ ဆင်ခြင်ခြင်း၏ဤလိုင်းအားဖြင့်တဦးတည်းအမြင်ပထမဦးဆုံးပေါ်ထွန်းဘယ်လိုသဘောပေါက်,
ကာတွန်းမြတ်စွာဘုရားဓာတ်ပုံ: Animated ဗုဒ္ဓ buddan.gif
">DN 16 (ဃ ii 137)
- နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက် -
ဤတွင်, အာနန်ဒာ, တစ်ဦးariyasāvaka Buddhe aveccappasādaနှင့်ပြည့်စုံသည်:
ငါ့ကိုအကြောင်းမူကား, နောက်တဖန်မ niraya, နောက်တဖန်မtiracchāna-yoni
ကိုနောက်တဖန်မရှိ၏ pettivisaya, မပျော်ရွှင်နောက်တဖန်ပြည်နယ်, ကံမကောင်း၏, ဒုက္ခ၏, ငါ
sambodhi လတ်ခံရအချို့, ဒုက္ခ၏ပြည်နယ်များမှအခမဲ့ဇာတိအားဖြင့်,
ငါ့ကိုအကြောင်းမူကား, နောက်တဖန်မ niraya, နောက်တဖန်မtiracchāna-yoni,
Dhammādāsaသမုတ်သောဓမ္မအပေါ်ဟောပြောချက်, အariyasāvakaရာသိမ်းယူ expound
ကံမကောင်း၏, ဒုက္ခ၏, ငါ sambodhi လတ်ခံရအချို့,
ဒုက္ခ၏ပြည်နယ်များမှအခမဲ့ဇာတိအားဖြင့်, တစ်ဦးsotāpannaဖြစ်၏။ ဤတွင်, အာနန်ဒာ, တစ်ဦးariyasāvaka Buddhe aveccappasādaနှင့်ပြည့်စုံသည်:
သူက Dhamme aveccappasādaနှင့်ပြည့်စုံသည်:
သူဟာ ariyas နှငျ့ညီညှတျသောသိလနှင့်ပြည့်စုံ၏,
မိမိကိုမိမိ၏ကြေညာနိုင်သည် ‘’ ငါ့ကိုအကြောင်းမူကား, နောက်တဖန်မ niraya,
နောက်တဖန်မtiracchāna-yoni လည်းမရှိ, နောက်တဖန်မ pettivisaya , မပျော်ရွှင်နောက်တဖန်ပြည်နယ်, ကံမကောင်း၏, ဒုက္ခ၏, ငါ sambodhi
Sato, သင်သည်ရဟန်းတို့တည်နှင့်sampajānasသင့်သည်။ ဒါဟာသင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intruction ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခါရဟန်းသည် Sato ဘယ်လိုရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း ဤတွင်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည်
ထို့ကြောင့်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည် Sato ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါရဟန်းသည်sampajānaဘယ်လိုရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း ဤတွင်ရဟန်းတို့
ထို့ကြောင့်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည်sampajānaဖြစ်ပါတယ်။ Sato, သင်သည်ရဟန်းတို့တည်နှင့်sampajānasသင့်သည်။ ဒါဟာသင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intruction ဖြစ်ပါတယ်။
- ကပန်းပွင့်ရဲ့ရာသီမဟုတ်သော်လည်းအာနန္ဒာ, အအမွှာ sala သစ်ပင်, အပြည့်အဝပွင့်လန်း၌ရှိကြ၏။ ထိုအခါထို
Tathagata ၏ဝတ်ပြုရေးတွင်ပေါ်မှာ strewn ကြသည်။ ထိုအကောငျးကငျသန္တာပန်းပွင့်ကောင်းကင်စန္ဒကူးနံ့သာမှုန့်တို့သည်မိုဃ်းကောင်းကင်သည်မိုဃ်းရွာစေခြင်းမှဆငျးသကျအ
Tathagata ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တစ်စက်နဲ့လွှင့်အပေါ်သို့နှင့် Tathagata
၏ဝတ်ပြုရေးတွင်ပေါ်မှာ strewn ကြသည်။ ကောင်းကင်အသံနှင့်ကောင်းကင်ဘုံရှင်တူရိယာများ၏အသံ Tathagata အဘို့အရိုထဲကလေထုထဲတွင်ဂီတကိုမှန်ကန်စေသည်။
ဒါဟာTathāgata, လေးစားကြည်ညိုလေးမြတ်, လေးစားခံရသော, ရှိခိုးခြင်းနှင့်ဂုဏ်ပြုကြောင်း, ဤသဖြင့်အာနန္ဒာသည်မဟုတ်။ သို့သော်အာနန္ဒာမည်သည့်ရဟန်းသို့မဟုတ်
bhikkhuni, layman သို့မဟုတ် laywoman,
ဓမ္မနှင့်အညီနေထိုင်နေ, တကဏ်ဍက, ချစ်ခင်လေးမြတ် venerates, ကိုးကွယ်ချေ,
ထိုTathāgataရိုသေ အများဆုံးမြတ်သောပူဇော်ခြင်းနှင့်အတူ။ သို့ဖြစ်. , အာနန်ဒာ, သငျသညျဤသို့ကိုယ်ကိုကိုယ်လေ့ကငျြ့ပေးသင့်တယ်:
- ‘’ သင်တို့တွင်အချို့သောစေရန်, အာနန်ဒာ, ကဤသို့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ: ‘ဆရာကိုစကားအဆုံးသတ်ပြီ, ဆရာ’ ‘မရှိတော့လည်းရှိ၏။ ဒါပေမဲ့ဒီ, အာနန်ဒာ, ဒါကြောင့်စဉ်းစားမရသင့်ပါတယ်။ ဒါကကျွန်မသွန်သင်ကြပြီနဲ့ဓမ္မနှင့်ဝိနည်းသကဲ့သို့သင်တို့အားပြတော်မူသောအာနန်ဒာ,
1961 Fri Aug 19 2016 - Kusinara မှာ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. ၏နောက်ဆုံး Place
1961 Fri Aug 19 2016 - Kusinara မှာ
ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. ၏နောက်ဆုံး Place
ဘေးဥပဒ်, မတော်တဆထိခိုက်မှုမိမိကိုယ်ပိုင်ကိုးကွယ်သျှင်, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သန့်ရှင်းသော။ ဒီစကားလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ဗုဒ္ဓ,
အထူးသဖြင့်, Sākyamuniထိုက်, အသျှင်, သန့်ရှင်းစေ,
တစ်ဦးသူတော်စင်တစ်ဦး epithet သို့မဟုတ်နာမတော်ကိုမအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ နောက်ဆုံးသန့်ရှင်းစေခြင်း, တစ်ဦးအရဟံအသိပညာ, သင်ယူမှု, ပညာသင်ဆု, သိပ္ပံမှီခဲ့သူတယောက်, အကောင်းဆုံးဠာသိထားမင်္ဂလာ, ကောင်းစွာသွားလာသူကားအဘယ်သူသည်ပညာကို။ တစ်ဘုံတစ်ဦးဗုဒ္ဓပြိုင်ဘက်ကင်း၏
epithet, ဉီး, အဘယ်သူမျှမယောက်ျားပီမှမနှိုငျးယှ,
အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဒုတိယ, virility တစ်ဦးကဆရာ, Known devo
မြင်ကျွမ်းကျင်နားလည်; အသိပညာ, နိုး, ပညာရှိပိုင်သောသူ, ကျယ်ပြန့် full-လွကိုးကွယ်သျှင်, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သန့်ရှင်းသော။ ဒီစကားလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ဗုဒ္ဓ၏တစ်ဦး epithet သို့မဟုတ်အမည်အဖြစ်အသုံးပြုသည်, inparticular, Sākyamuniမြင်
A hearer, listener, pupil;”>ဒီစကားလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ဗုဒ္ဓ,
အထူးသဖြင့်, Sākyamunisāvakasaṅgho, => တစ်ဦးကကွားနာ, နားထောင်သူ,
ကျောင်းသားတစ်ဦး epithet သို့မဟုတ်နာမတော်ကိုမအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ Worshipful, venerable, blessed, holy.”>ရိုး, ရိုးသားသော, ဖြောင့်မတ်ကိလေသာ (N က | nom) => ကိုးကွယ်သျှင်, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သန့်ရှင်းသော။ Method, manner, means;”>တပည့်ñāyappaṭipanno (N က | nom) => Method ကို, နည်းလမ်း, ကိုဆိုလိုသည်, A hearer, listener, pupil;”>ဒီစကားလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ဗုဒ္ဓ,
ကျောင်းသားတစ်ဦး epithet သို့မဟုတ်နာမတော်ကိုမအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ Worshipful, venerable, blessed, holy.”>ကိလေသာ (N က | nom) => ကိုးကွယ်သျှင်, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သန့်ရှင်းသော။ Namely, that is to say cattāri => Four purisayugāni => Manhood, virility aṭṭha => Eight purisapuggalā, => Manhood, virility esa => see eso bhagavato (N|NOM) =>”>တပည့်yadidaṃ
(N က | ACC) => အမည်, သည်ဟုဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်cattāri =>
လေးpurisayugāni => ယောက်ျားပီ, virility aṭṭha​​ =>
ရှစ်purisapuggalā, => ယောက်ျားပီ, virility ESA => eso ကိလေသာမြင်
(N က | nom) => သန့်ရှင်းသော, မင်္ဂလာ, အသျှင်, ကိုးကွယ်ရ။ Sacrificial, worthy of offerings, worshipful pāhuneyyo (N|NOM) => Sufficient
“>တစ်ဦးdiscipleāhuneyyo (N က | nom) => ကိုယ်ကျိုး, ဟာယယဇ်ပူဇော်ခံထိုက်, ဦးညွတ်pāhuneyyo (N က | nom) => မလုံလောကျ
Pre-eminence, supremacy puññakkhettaṃ (N|ACC) => Meritoriousness, merit, good workslokassā’ => see akkhāyikā and lokāyataṃ ti.”>akkhāyikāနှင့်lokāyataṃ
ti တွေ့မြင် => Meritoriousness, ကုသိုလ်, ကောင်းသောworkslokassā
‘=> | => ထှဋျ, အာဏာpuññakkhettaṃ (ACC N က) | နဖူးanuttaraṃ (ACC N)
">Ariya-kantehi sīlehisamannāgato hoti သူဟာ ariyas နှငျ့ညီညှတျသောသိလနှင့်ပြည့်စုံ၏,
Uninjured, intact, faultless
“>နဂိုအတိုင်း acchiddehi => Uninjured, စုံလ
“>akammāsehi => Intransitive
“>aparāmaṭṭhehi => Unconquered
">ပဿဒ္ဓိ, Self-အာရုံစူးစိုက်မှု, အေးဆေးတည်ငြိမ်
လတ်ခံရအချို့, ဒုက္ခ၏သဘောသဘာ freefrom
“>kāyānupassī => satipaṭṭhānoမြင်
Ardent, zealous, strenuous, active
“>ātāpī =>, Ardent ထကျသနျ, စိတ်အားသန်သော, တက်ကြွ
Of retentive memory or active mind, thoughtful, reflecting
“>satimā, => retention မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်တက်ကြွစိတ်၏၏, စဉ်းစားဟန်, ထင်ဟပ်
, နှိမ့်ချအောင်နိုင်, တားဆီးဖို့, , သွန်သင်ပညာပေး, ရထားမှ
abhijjhā-domanassaṃ; Feeling, sensation, perception;”>vedanāsu => Feeling, အလွင်ပင်အရသာ, သညာ, နာကျင်မှု, ဆငျးရဲဒုက်ခ
abhijjhā-domanassaṃ; To paint, to variegate
“>citte => variegate ရန်, ဆေးထိုးခြင်းရန်
To dwell, sojourn, live
“>တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ နေ. ရန် viharati (vB) => တည်းခိုခြင်းငှါ,
Knowing, understanding, conscious
“>sampajāno (N က | nom) => သိ, နားလည်မှု, သတိ
To remove, put away;”>vineyya => ကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှါ၎င်း, , နှိမ့်ချအောင်နိုင်, တားဆီးဖို့, , သွန်သင်ပညာပေး, ရထားမှ
abhijjhā-domanassaṃ; Justly, righteously
“>dhammesu (N က | LOC) => တရားသဖြင့်ဖြောင့်
abhijjhā-domanassaṃ။ ထို့ကြောင့်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည် Sato ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါရဟန်းသည်sampajānoဘယ်လိုရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း ဤတွင်ရဟန်းတို့
ထို့ကြောင့်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည်sampajānoဖြစ်ပါတယ်။ Sato, သင်သည်ရဟန်းတို့တည်နှင့်sampajānosသင့်သည်။ ဒါဟာသင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intruction ဖြစ်ပါတယ်။
- ကပန်းပွင့်ရဲ့ရာသီမဟုတ်သော်လည်းအာနန္ဒာ, အအမွှာ sala သစ်ပင်, အပြည့်အဝပွင့်လန်း၌ရှိကြ၏။ ထို Tathagata နှင့်တစ်စက်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လွှင့်အပေါ်သို့နှင့်အပွင့်လည်းမိုဃ်းကိုရွာစေနှင့်
အ Tathagata ၏ဝတ်ပြုရေးတွင်ပေါ်မှာ strewn ကြသည်။ ထိုအကောငျးကငျသန္တာပန်းပွင့်ကောင်းကင်စန္ဒကူးနံ့သာမှုန့်တို့သည်မိုဃ်းကောင်းကင်သည်မိုဃ်းရွာစေခြင်းမှဆငျးသကျအ
‘’ သင်တို့တွင်အချို့သော, အာနန်ဒာရန်ကဤသို့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ: ‘ဆရာကိုစကားအဆုံးသတ်ပြီ, ဆရာ’ ‘မရှိတော့လည်းရှိ၏။ ဒါပေမဲ့ဒီ, အာနန်ဒာ, ဒါကြောင့်စဉ်းစားမရသင့်ပါတယ်။ ဒါကကျွန်မသွန်သင်ကြပြီနဲ့ဓမ္မနှင့်ဝိနည်းသကဲ့သို့သင်တို့အားပြတော်မူသောအာနန်ဒာ,
ကျန်းမာ & သဟဇာတ: သန့်စင်သောအပန်းဖြေ - အတိတ်ဆိတ်ခံစားကြည့်ပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက်မြည်တမ်း & ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတေးဂီတ - Hanshan ဗိမာနျတျော
Lin က Feng Ting ရဲ့ Mu Chan-pipa, erhu, dizi
om အတွဲများကိုမဏိ Padme Hum - မူရင်းတိုးချဲ့ Version.wmv
ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မသီချင်း - Imee Ooi အားဖြင့်နှလုံးရောဂါ Sutra (Sanskrit)
ဗုဒ္ဓဘာသာတှေးတောဆငျခွတေးဂီတ - - အနားယူဇင်ဥယျာဉ် - Kokin Gumi
13.484.371 Views စာ
meditacion - ဂီတမသန်စွမ်း dormir (excelente)
8.122.639 Views စာ
ဂီတက de relajación
2.171.656 Views စာ
ဗုဒ္ဓဘာသာတှေးတောဆငျခွ - Lama Ole Nydahl
ဥယျာဉ်ထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် - HD ကို - အေးဆေးတည်ငြိမ်သဘာဝတရားကဗုဒ္ဓတှေးတောဆငျခွ
1961 Fri Aug 19 2016 - ထိုခန္ဓာအပေါ် B. ပုဒ်မ (ကိုယ်ပိုင်)
B. Section on the Khandhas(own)
And furthermore, bhikkhus,abhikkhu dwells observing dhammas in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion) with reference to the five khandhas(own). And furthermore, bhikkhus, how doesabhikkhu dwell observing dhammas in dhammas(Name of the first book of the Abhidhamma piṭaka and (dhammaṃ)Nature/ condition/ quality/ property/
the Buddha; the Buddhist scriptures; religion) with reference to the five khandhas(own)?
Here, bhikkhus,abhikkhu [discerns]: “such is rūpa(Form, figure, shape; image, representation; the body; in gram.averbal or nominal form; beauty; natural state; characteristic), such is the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) of rūpa(Form, figure, shape; image, representation; the body; in gram.averbal or nominal form; beauty; natural state; characteristic), such is the passing away of rūpa(Form, figure, shape; image, representation; the body; in gram.averbal or nominal form; beauty; natural state; characteristic); such is vedanā (Feeling/ sensation/ perception; pain/suffering), such is the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) of vedanā (Feeling/ sensation/ perception; pain/suffering), such is the passing away of vedanā (Feeling/ sensation/ perception; pain/suffering); such is saññā(Sense, consciousness, perception; intellect, thought; sign, gesture; name), such is the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) of saññā(Sense, consciousness, perception; intellect, thought; sign, gesture; name), such is the passing away of saññā(Sense, consciousness, perception; intellect, thought; sign, gesture; name); such is saṅkhāra(Constructing, preparing, perfecting, embellishing; aggregation; matter; karma; the skandhas), such is the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) of saṅkhāra(Constructing, preparing, perfecting, embellishing; aggregation; matter; karma; the skandhas), such is the passing away of saṅkhāra(Constructing, preparing, perfecting, embellishing; aggregation; matter; karma; the skandhas); such is viññāṇa(Intelligence, knowledge; consciousness; thought, mind), such is the samudaya(Rise, origin, commencement; origination, cause; multitude) of viññāṇa(Intelligence, knowledge; consciousness; thought, mind), such is the passing away of viññāṇa(Intelligence, knowledge; consciousness; thought, mind)“.
புனச பரங், பிக்காவே, பிக்கு தம்மேஸு தம்மான்ய்பஸ்ஸி விஹாரதி பன்சஸ்ஸு உபாதானக்கந்தேஸு. கதங் ச பனா, பிக்காவே, பிக்கு தம்மேஸு சித்தானுபஸ்ஸி விஹாரதி, பன்சஸ்ஸு உபாதானக்கந்தேஸு ?
இதா, பிக்காவே, பிக்கு ‘இதி ரூபங், இதி ரூபஸ்ஸ ஸமுதாயொ இதி ரூபஸ்ஸ அத்தங்கமொ; இதி வெதனா இதி வெதனாய அத்தங்கமொ; இதி ஸஞ்யா, இதி ஸஞ்யாய ஸமுதாயொ, இதி ஸஞ்யா அத்தங்கமொ;இதி ஸங்காரா, இதி ஸங்காரானங் ஸமுதாயொ,இதி ஸங்காரானங் அத்தங்கமொ; இதி விஞ்ஞானங், இதி விஞ்ஞானஸ்ஸஸமுதாயொ,இதி விஞ்ஞானஸ்ஸ அத்தங்கமொ’தி.
இதி அஜ்ஹத்தங் வா தம்மேஸு தம்மானுப்பஸ்ஸி விஹாதி, பஹித்தா வா தம்மேஸு தம்மானுப்பஸ்ஸி விஹாதி, அஜ்ஹத்த-பஹித்தா வா தம்மேஸு தம்மான்ய்பஸ்ஸி விஹாதி; ஸமுதாய-தம்மானுப்பஸ்ஸி வா தம்மேஸு விஹாதி, வய-தம்மானுப்பஸ்ஸி வா தம்மேஸு விஹாதி, ஸமுதாய-வய-தம்மானுப்பஸ்ஸி வா தம்மேஸு விஹாதி; ‘அதி தம்மா’ தி வா பன்னஸ்ஸ ஸதி பச்சுபத்திதா ஹோதி, யாவதேவ ஞானமத்தாய பத்திஸத்திமத்தாய, அனிஸ்ஸிதொ விஹாதி, ந ச கின்சி லோகெ உபாதியதி, ஏவம்பி கொ, பிக்காவே, பிக்கு தம்மேஸு தம்மானுப்பஸ்ஸி விஹாதி, பன்சஸு உபாதானக்கந்தேஸு.
ထိုခန္ဓာအပေါ် B. ပုဒ်မ (ကိုယ်ပိုင်)
(Dhamma အတွက်အဘိဓမ္မာpiṭaka၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်နှင့် (dhammaṃ)
သဘာဝတရားက / အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် / ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ
Dhamma လေ့လာကျိန်းဝပ်; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု /
အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း,
ပညတ်တိ; သီလ / ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု,
ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား; ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု.
၏အဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက / အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် /
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်၏တံခါးခုံဘာသာရေး;
function ကို /
အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ;
ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား; ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ,
ဘာသာတရားကို) ကိုငါးခန္ဓာ (ကိုယ်ပိုင်) အားရည်ညွှန်းအတူ။ function
ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ /
ဝေရဟန်းတို့အဘယ်သို့ရဟန်းသည် Dhamma အတွက် Dhamma
(ထိုအဘိဓမ္မာpiṭaka၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်နှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက /
အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် / ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသစောင့်ကြည့်
နေ. ပါဘူး ဖြစ်ရပ်ဆန်း;
အယူဝါဒ; ပညတ်တိ; သီလ / ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု,
၏အဘိဓမ္မာpiṭaka၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်၏တံခါးခုံနှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက /
အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် / ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု /
ဝိသေသအတွက်ဘာသာတရားကို ; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ /
ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ; ပညတ်တိ; သီလ / ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု,
ဘာသာတရားကို) ကိုငါးခန္ဓာ (ကိုယ်ပိုင်) အားရည်ညွှန်းနှင့်အတူ?
[တို့ကိုသိ]: “ထိုကဲ့သို့သောrūpa (။ Form ကို, ပုံ, အသွင်သဏ္ဌာန်,
ပုံရိပ်, ကိုယ်စားပြုမှု; ကိုယျခန်ဓာ;
ဂရမ်ထဲမှာနှုတ်သို့မဟုတ်အမည်ခံပုံစံကို; အလှတရား; သဘာဝအလျောက်ပြည်နယ်;
ဝိသေသ) ဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော (ထို samudaya ဖြစ်ပါသည် rūpa၏လူအစုအဝေး)
(Form ကို, ပုံ, အသွင်သဏ္ဌာန်; ထ, ဇာစ်မြစ်, တင်သည့်; ဖြစ်ပေါ်စေပုံရိပ်,
ကိုယ်စားပြုမှု; ကိုယျခန်ဓာ; ဂရမ်ထဲမှာနှုတ်သို့မဟုတ်အမည်ခံပုံစံကို။ ,
အလှအပ, သဘာဝအနိုင်ငံပိုင်; ဝိသေသ), ထိုသို့သောရွေ့သွားကွယ်ပျောက်တတ်၏ ထိုကဲ့သို့သောvedanā
(Feeling / အလွင်ပင်အရသာ / အမြင်; နာကျင်မှု / ဆငျးရဲဒုက်ခ) ဖြစ်၏,
ပုံရိပ်, ကိုယ်စားပြုမှု; ကိုယျခန်ဓာ။ ဂုဏ်အသရေ, သဘာဝအနိုင်ငံပိုင်; ဝိသေသ
Form ကို, ပုံ, အသွင်သဏ္ဌာန်) ၏ vedanā
(Feeling / အလွင်ပင်အရသာ / အမြင်; နာကျင်မှု / ဆငျးရဲဒုက်ခ) ၏ samudaya
(လူအစုအဝေးထ, ဇာစ်မြစ်, တင်သည့်; ဖြစ်ပေါ်စေ), ထိုသို့သောကွာvedanā
(Feeling / အလွင်ပင်အရသာ / အမြင်; နာကျင်မှု / ဆငျးရဲဒုက်ခ);
(Sense သည်, ဝိညာဏ်, သညာ, ဉာဏ်, အတွေး, နိမိတ်လက္ခဏာ, အမူအယာ; အမည်);
ဖြစ်ပေါ်အကြောင်းမရှိ, ထိုကဲ့သို့သောအ samudaya (ထ, ဇာစ်မြစ်, တင်သည့်ဖြစ်၏
(Sense သည်, ဝိညာဏ်, သညာ, ဉာဏ်, အတွေး, နိမိတ်လက္ခဏာ, အမူအယာ, ဉာဏ်,
အတွေး; နိမိတ်လက္ခဏာ, အမူအယာ; အမည်) အမည်), ထိုကဲ့သို့သောအsaññā (Sense
သည်, ဝိညာဏ်, သညာ၏ပရိနိဗ္ဗာန်လျက်ရှိ၏ ထိုကဲ့သို့သောsaṅkhāra
(တည်ဆောက်ခြင်းပြင်ဆင်နေ, ပြည့်စုံ, embellishing;
သတင်းအချက်အလက်စုစည်းခြင်း; ကိစ္စ, ကံ၏၏ skandhas) သည်saṅkhāra၏
(တည်ဆောက်ခြင်းပြင်ဆင်နေ, ပြည့်စုံ, embellishing, ထိုကဲ့သို့သောအ samudaya
(လူအစုအဝေး; ဖြစ်ပေါ်အကြောင်းမရှိထ, ဇာစ်မြစ်, တင်သည့်) ဖြစ်ပါသည်; သတင်းအချက်အလက်စုစည်းခြင်း;
ကိစ္စ, ကံ၏၏ skandhas), ထိုကဲ့သို့သော (တည်ဆောက်ခြင်းပြင်ဆင်နေ, ပြည့်စုံ,
ကိစ္စ, ကံ၏၏ skandhas); ထိုကဲ့သို့သောviññāṇa
(ထောက်လှမ်းရေး, အသိပညာအတွေးစိတ်; ဝိညာဏ်) သည်ထိုကဲ့သို့သောအ samudaya (ထ,
ဇာစ်မြစ်, တင်သည့်အလုံးအရင်း; ဖြစ်ပေါ်စေ) ဖြစ်ပါတယ်viññāṇa၏
(ထောက်လှမ်းရေး, အသိပညာ, ဝိညာဏ်, အတွေး, စိတ်), ထိုသို့သောသွားတာဖြစ်ပါတယ် ကွာviññāṇa (ထောက်လှမ်းရေး, အသိပညာ, ဝိညာဏ်, အတွေး, စိတ်) ၏ “။
ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း;
အယူဝါဒ; ပညတ်တိ; သီလထို့ကြောင့်သူ Dhamma အတွက် Dhamma
(ထိုအဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက / အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် /
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်လေ့လာကျိန်းဝပ် /
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု, ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား;
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ၏အဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက /
ဝိသေသ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်၏တံခါးခုံဘာသာရေး; function ကို / အလေ့အကျင့် /
/ အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ; ပညတ်တိ; သီလ /
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို) ကိုငါးခန္ဓာ (ကိုယ်ပိုင်)
function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ /
1961 Fri Aug 19 2016 - အBojjhaṅgasအပေါ်ဃပုဒ်မ (ဗောဓိ၏အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်တစ်ဦးမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးboj
1961 Fri Aug 19 2016 - အBojjhaṅgasအပေါ်ဃပုဒ်မ
ဘာသာတရားကို) ခုနစျပါးbojjhaṅgasရည်ညွှန်းအတူ။ function
(အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်၏မဲဆန္ဒနယ်မှရည်ညွှန်းနှင့်အတူ ဗောဓိ, တစ်ဦးမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးbojjhaṅgasသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့) ရှိပါသလဲ
ရဟန်းသည်ထို sati sambojjhaṅga (စာမျက်နှာရှိဖြစ်ခြင်းရဟန်းတို့;
စိတ်၏တက်ကြွပြည်နယ်, မည်သည့်ဘာသာရပ်, အာရုံစူးစိုက်မှုကို, သတိ, အတွေး,
မှာမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့လိုအပ်တဲ့, နားလည်: “အ
sati sambojjhaṅga (စာမျက်နှာသည်ရှိ၏, စိတ်၏တက်ကြွပြည်နယ်,
အာရုံစူးစိုက်မှုကို, သတိ, အတွေး, ရောင်ပြန်ဟပ်မှု,
ဝိညာဏ်တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သို့မဟုတ် ဗောဓိ၏မဲဆန္ဒနယ်, ငါ့အထဲမှာတစ်ဦးမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးbojjhaṅgasသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့) “ရှိပါတယ်, အ
sati sambojjhaṅga (စာမျက်နှာဖြစ်ခြင်းမျှမရှိ, စိတ်တက်ကြွပြည်နယ်,
၏, သူနားလည်: “မရှိ sati sambojjhaṅga (စာမျက်နှာသည်ရှိ၏,
တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်ဗောဓိ၏မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်သတိရှိ ငါ့အထဲမှာအ) ကမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးbojjhaṅgasသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့ ” ဖြစ်. , ,
တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်ဗောဓိ၏မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်သတိရှိတယ်, သူသည် unarisen
sati sambojjhaṅga (စာမျက်နှာကိုဘယ်လိုနားလည် ဗုဒ္ဓ၏အသိပညာ) ပျေါပေါကျဖို့လာ; သူက
sati sambojjhaṅga (စာမျက်နှာပျေါထှနျးကိုဘယ်လိုနားလည်;
ကို dhammavicaya sambojjhaṅgaဖြစ်ခြင်း: ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ( “အ
dhammavicaya sambojjhaṅgaရှိပါတယ် ငါ့အထဲမှာအယူဝါဒ,
dhammavicaya အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅgaဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်မ: “မရှိ
လည်းမရှိငါ့အထဲမှာ “; သူက
unarisen dhammavicaya sambojjhaṅga (ဩဝါဒစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး,
ပျေါပေါကျဖို့ကြွလာပုံကိုနားလည်; သူက dhammavicaya sambojjhaṅgaပျေါထှနျး
ဖြစ်ခြင်း: တစ်ဦးကဖြန့်နွယ်တစ်ဦးအဖြစ် ( “အvīriyasambojjhaṅgaရှိပါတယ် ဗောဓိ၏အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်,
(ကဖြန့်နွယ်လည်းမရှိ: သူနားလည်, အတွင်းပစ္စုပ္ပန်အvīriyasambojjhaṅga
(ကအဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်၏မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်သောက်သုံး ဗောဓိပင်, ငါ့ကိုအတွင်း) ကမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးbojjhaṅgasသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့ “ရှိပါတယ်, အတွင်းပစ္စုပ္ပန်
“မသနားsambojjhaṅgaလည်းရှိ၏ (ကအဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်သောက်သုံး ဗောဓိ၏, ငါ့အထဲမှာတစ်ဦးမြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးbojjhaṅgasသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့) “ရှိပါတယ်, သူက
passaddhi ဖြစ်ခြင်း (ဗောဓိတစ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်ချအေးဆေး,
တည်ငြိမ်ခြင်း, repose, တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးsambojjhaṅga,
ပစ္စုပ္ပန်အတွင်းသူကနားလည်: “အ passaddhi sambojjhaṅgaလည်းရှိ၏ ( ဗောဓိတစ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်,
တည်ငြိမ်ခြင်း, repose, တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးsambojjhaṅgaချအေးဆေး,
ငါ့အထဲမှာ “; ထိုအရပ်၌
(ဗောဓိတစ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်ချအေးဆေး, တည်ငြိမ်ခြင်း, repose,
မပစ္စုပ္ပန်အတွင်းသူကနားလည်: “မရှိ passaddhi ရှိပါတယ် ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga
(ဗောဓိတစ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်, တည်ငြိမ်ခြင်း, repose,
unarisen passaddhi sambojjhaṅga (ချအေးဆေး, တည်ငြိမ်ခြင်း, repose,
နားလည်ပျေါပေါကျဖို့လာ; သူဘယ်လိုပျေါထှနျး passaddhi sambojjhaṅga
တည်ငြိမ်ခြင်း, repose, တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးsambojjhaṅgaရှိပါတယ်)
(Agreement ကို, ငြိမ်းချမ်းရေး, ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး, ပဿဒ္ဓိ,
ဖြစ်ခြင်းပစ္စုပ္ပန်အတွင်းသူကနားလည်: “အဲဒီမှာ “ငါ့ကိုအတွင်း;
ငြိမ်းချမ်းရေး, ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး) ကိုသမာဓိsambojjhaṅgaဖြစ်၏ ထိုအရပ်၌သမာဓိsambojjhaṅgaဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
ပစ္စုပ္ပန်အတွင်းသူကနားလည်: ” အဘယ်သူမျှမသမာဓိsambojjhaṅga “ငါ့ကိုအတွင်းရှိ၏ ပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာ;
သူက unarisen သမာဓိsambojjhaṅga (ပဿဒ္ဓိ, Self-အာရုံစူးစိုက်မှု,
ငြိမ်းချမ်းရေး, ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး) ကိုမည်သို့နားလည်; စုံလင်ခြင်းမှတီထွင်လျက်ရှိ၏သူကပျေါထှနျးသမာဓိsambojjhaṅga (ပဿဒ္ဓိ,
ငြိမ်းချမ်းရေး, ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး) ကိုမည်သို့နားလည်သည်။
(နာကျင်မှုနဲ့ပျော်မွေ့ဖို့လစျြလြူရှု, ဥပေက္ခာသမ္, နှုတ်ထွက်စာ,
ပစ္စုပ္ပန်ကသူနားလည်ဖြစ်ခြင်း: “အရှိ upekkhāsambojjhaṅga
ငါ့အထဲမှာ “; ထိုအရပ်၌upekkhāsambojjhaṅgaအတွင်း
ပစ္စုပ္ပန်ကသူနားလည်ဖြစ်ခြင်းမ: “ရှိပါတယ် အဘယ်သူမျှမupekkhāsambojjhaṅga
ငါ့အထဲမှာ “; သူက
unarisen upekkhāsambojjhaṅga (နာကျင်မှုနဲ့ပျော်မွေ့ဖို့လစျြလြူရှု,
ဥပေက္ခာသမ္, နှုတ်ထွက်စာ, ဗောဓိတစ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို) ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း,
ဒါမှမဟုတ်သူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်နေသော
(dhammaṃ) သဘာဝတရားက / အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် /
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်;
အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ; ပညတ်တိ; သီလ /
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ၏အဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့်
function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; ဆုံးမဩဝါဒ; ပညတ်တရားတော်ကို; သီလ / ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု, ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား; ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို)
ပြင်ပမှ, ဒါမှမဟုတ်သူ Dhamma
ဝိသေသလေ့လာကျိန်းဝပ်; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ /
အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ; ပညတ်တိ ;
သီလ / ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု, ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား;
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို) Dhamma အတွက်သဘာဝတရားက /
အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် / ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ
(ထိုအဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်); function ကို /
တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ; ပညတ်တိ; သီလ /
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို)
အတွက်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဖြစ်ရပ်၏ပရိနိဗ္ဗာန် (sapindus detergens)
(အအဘိဓမ္မာpiṭaka၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်နှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက /
အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့်သူသည် samudaya (; ဖြစ်ပေါ်စေလူအစုအဝေးထ,
ဇာစ်မြစ်, တင်သည့်) စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ် ဝိသေသ
/ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု /; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်;
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို),
Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ် (ထိုအဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက /
ဝိသေသ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏နာမတော်; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်;
တရားမျှတမှု, ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား; ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု.
, ဘာသာတရားကို), သို့မဟုတ်သူသည် samudaya (ထ, ဇာစ်မြစ်,
တင်သည့်လေ့လာကျိန်းဝပ်; ဖြစ်ပေါ်အကြောင်းမရှိ; လူအစုအဝေး) နှင့် Dhamma
အတွက်ကွာဖြစ်ရပ် (sapindus detergens) ၏ဖြတ်သန်း (အမည် ထိုအဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ) သဘာဝတရားက / အခွအေနေ / အရည်အသွေးမြင့် / ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏, function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; ဆုံးမဩဝါဒ; ပညတ်တရားတော်ကို; သီလ / ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, တရားမျှတမှု, ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား; ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို); သို့မဟုတ်အခြား
[သဘောပေါက်:]; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ /
အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ “ဒီ Dhamma (ထိုအဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့်
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည်များမှာ ;
ဘာသာတရားကို) “! sati;
ရုံမျှသာ nana (အသိပညာ) ၏အတိုင်းအတာများနှင့်မျှသာpaṭissati
(အစွမ်းဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော) ဖို့, သူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်သည်
အာရုံစူးစိုက်မှုကို, သတိ, ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, ဝိညာဏ်စိတ်ထင်) သူကတသန့်ကျိန်းဝပ်လျက်, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘာမှမှတွယ်ကပ်မထားဘူး။ function
အယူဝါဒထို့ကြောင့်, ရဟန်းသည် Dhamma အတွက် Dhamma (ထိုအဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့်
function ကို / ခုနစျပါးbojjhaṅgas
အလေ့အကျင့် / တာဝန်; အရာဝတ္ထု / အရာ / အိုင်ဒီယာ / ဖြစ်ရပ်ဆန်း; အယူဝါဒ;
ဗုဒ္ဓ၏တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရား; ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. က) မြတ်စွာဘုရား၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောပညာရေးအဘို့အရာခုနစ်ပါးbojjhaṅgasသို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့ရှိပါတယ်။
1961 Fri Aug 19 2016 - ထိုအမှန်တရားအပေါ်အီးပုဒ်မ
ဘာသာတရားကို) အလေး ariya ရည်ညွှန်းနှင့်အတူ·သစ္စာ
(သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရား Noble အမှန်တရားတွေ) ။ function
(သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားက , Noble အမှန်တရားတွေ)?
E1 ။ Dukkhasacca ၏ Exposition (ဆငျးရဲဒုက်ခ, နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက်
(Ultimate Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား၏ချုပ်ရာ))
dukkha ariyasacca (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate
Re-ဖွားမြင်, အသစ်တဖန်ဖြစ်တည်မှု; နွယ်, မိသားစုဇာတ်, မျိုး, ကြင်နာ,
အမျိုးမျိုး) dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့
Ultimate Goal) သူတော်ကောင်းတရားသည်သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏, အရိယာသစ်စာတရား),
အိုမင်း dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက်
(Ultimate Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား)) (အနာရောဂါ
dukkha ဆငျးရဲဒုက်ခ, နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal)
သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား၏ (ရပ်နားခြင်းသည်) ဖြစ်ပါသည် (သေခြင်းတရားသဆေုံးခွငျး)
maraṇa dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate
Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား), ဝမ်းနည်းခြင်း,
မြည်တမ်းခြင်းကို, dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့
Ultimate Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရား Noble သည် သမ္မာတရားကို),
(ဟာစိတ်ပျက်အားငယ်မှောင်, Melancholie) နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ dukkha
(ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate
ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်), မကြိုက်သည်အဘယ်အရာနှင့်အတူအသင်း dukkha
(ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (Ultimate ဖြစ်ပါသည် ထာဝရ
Bliss) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား) အတွက်ရည်မှန်းချက်,
ကြိုက်တယ်သည်အဘယ်အရာမှ dissociation dukkha ဖြစ်ပါတယ်
(တဦးတည်းလိုရမှမဆငျးရဲဒုက်ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့
Ultimate Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား), dukkha သည်
(၏ချုပ်ရာ ခံစားနေရပြီး, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား), တိုတိုအတွက်, ငါးupādāna·ဋ·ခန္ဓာ (ထင်း, လောင်စာ, တည်ရှိမှုဖက်တွယ်,
ပူးတွဲမှု) dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate
Goal) သူတော်ကောင်းတရားအမှန်တရားအရိယာသစ်စာတရား) ဖြစ်ပါသည်။
jāti (; တစ်ဦးကလေးမွေးဖွားသို့မဟုတ်ဖြစ်တည်မှုဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရ,
အမျိုးမျိုးမွေးဖွားခြင်း) အဘယျရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း ,
မွေးဖွား, အနွယ်ဖွား [သတ္တဝါများ၏အမျိုးမျိုးသောသင်တန်းတွေ, jāti (;
အသစ်တဖန်ဖြစ်တည်မှု; နွယ်, မိသားစုဇာတ်မျိုး, ကြင်နာ,
အမျိုးမျိုးမွေးဖွားခြင်း) အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ္တဝါသည်အ အမိဝမ်းသို့]
ခြင်း,] ကမ္ဘာ့အ [ပေါ်ပေါက်ခြင်း, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, (ကိုယ်ပိုင်)
ကိုခန္ဓာ၏ apparition ခြင်း, āyatanas၏ဝယ်ယူမှု (ရာဌာန, နေရာ, နကွေ၏, အိမ်,
ထိုင်ခုံ, ဆုံရပ်, သရဲအခြောက်, receptacle, သတ္တုတွင်း ; ယဇ်ပလ္လင်, နတ်ကွန်း, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ, အရင်းအမြစ်, fount အကြောင်းမရှိ, ဇာစ်မြစ်) ။ ဤရဟန်းတို့jāti (; တစ်ဦးဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရကလေးမွေးဖွားသို့မဟုတ်တည်ရှိမှု,
အဘယ်ရဟန်းတို့, (စျဟောငျးအသက်, decrepitude, ပျက်စီးယိုယွင်း) jarāသလဲ? ထိုသတ္တဝါများ၏အမျိုးမျိုးသောအတန်းထဲတွင်အမျိုးမျိုးသောသတ္တဝါ,
jarā (အဟောငျးအသက်, decrepitude, ပျက်စီးယိုယွင်း),
လောင်းပုပ်ပျက်သွားခံရပြည်နယ်, [အံသွား] ကျိုးပဲ့ပျက်စီးဘဲလျက်၏,
မီးခိုးရောင်ဆံပင်ရှိခြင်း၏, တွန့်ခံရ, တက်ကြွ၏ကျဆင်းမှု,
ထိုပျက်စီးယိုယွင်းသည်ကို အ indriyas (ထိုအာရုံ၏တွေဆက်ရှိနေသို့မဟုတ်လက်အောက်ခံ) ၏: ဤရဟန်းတို့jarā (အဟောငျးအသက်, decrepitude, ပျက်စီးယိုယွင်း) ဟုခေါ်သည်။
နှင့်အညီ, maraṇa (သဆေုံးခွငျး, သေခြင်း) အဘယျရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း သတ္တဝါများ၏အမျိုးမျိုးသောအတန်း,
အစုတေ့ [ဖြစ်တည်မှုထဲက] ပြောင်းလဲပြည်နယ်, ထိုချိုးတက်ခြင်း, ပျောက်ဆုံး,
သေဆုံး, maraṇa (သေခြင်းတရားသေခံ), အများ၏ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ခြင်း,
ချိုးတက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ္တဝါသည်အ ခန္ဓာ (ကိုယ်ပိုင်), ထိုအလောင်းကောင်၏ဆငျးသကျကိုတင်သော: ဤရဟန်းတို့, (သေခြင်းတရားသဆေုံးခွငျး) maraṇaဟုခေါ်သည်။
ကံမကောင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ရဟန်းတို့, dukkha Dhamma (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ,
နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal)
၏အမျိုးမျိုးသောအားဖြင့်ထိမိခြင်း (အဘိဓမ္မာpiṭakaနှင့် (dhammaṃ)
သဘာဝတရားက / အခွအေနေ / ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်၏အမည် အရည်အသွေးအ
/ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု / ဝိသေသ; function ကို / အလေ့အကျင့် / တာဝန်;
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို)), အ sorrrow ခြင်း, စိတ်မသာညည်းတွား, ဝမ်းနည်းခြင်း၏ပြည်နယ်, အတွင်းဝမ်းနည်းခြင်း, အတွင်းအလွန်ဝမ်းနည်းခြင်း: ဤရဟန်းတို့သည်ဝမ်းနည်းခြင်းဟုခေါ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို)), အော်ဟစ်ခြင်း, အ မြည်တမ်းခြင်း, ငိုကြွေးမြည်, မြည်တမ်းခြင်းကိုပြည်နယ်အော်ဟစ်ငိုကြွေးလျက်, ပြည်နယ်: ဤရဟန်းတို့မြည်တမ်းခြင်းကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။
ထိုအဆင်းရဲ dukkhaCessation, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal) အဘယျရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း ကိုယ်ထင်ရှားအဆက်အသွယ်,
မနှစ်မြို့ဖွယ် vedayitas (သိရှိနိုင်ရန်, သိရန်)
ကပေါက်ဖွားပေးသောဒုက္ခ၏ဘာပဲရဟန်းတို့ကိုယ်ထင်ရှား dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ,
နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal),
ကိုယ်ထင်ရှားမနှစ်မြို့ဖွယ်, dukkha (ရပ်နားခြင်း, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss
ဘို့ Ultimate Goal) : ဤရဟန်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal), ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ချုပ်ရာ (dukkha ဟုခေါ်သည်။
နှင့်အညီ, domanassa (စိတ်ပျက်အားငယ်မှောင်, Melancholie) အဘယျရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ကပေါက်ဖွားပေးသောဆငျးရဲဒုက်ခ,
နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal) ၏ဆငျးရဲဒုက်ခ,
နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal) ,,
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမနှစ်မြို့ဖွယ်, dukkha (ချုပ်ရာ, မနှစ်မြို့ဖွယ်
vedayitas (သိရန်, ၏ဘာပဲရဟန်းတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dukkha (ချုပ်ရာ ) သိရှိနိုင်ရန်: ဤရဟန်းတို့ domanassa (စိတ်ပျက်အားငယ်မှောင်, Melancholie) ဟုခေါ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. , ဘာသာတရားကို)) ,, ထိုဒုက္ခ, အစိတ်ပျက်လက်ပျက်, ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း၏ပြည်နယ်, စိတ်ပျက်အားငယ်ထဲမှာဖြစ်ခြင်း၏ပြည်နယ်: ဤရဟန်းတို့စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဟုခေါ်သည်။
dukkha (ပုံစံသကဲ့သို့, ဤတွင်? လွဲဖြစ်ပါသည်အသံ, အရသာ,
အနံ့ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss
ဘို့ Ultimate Goal),
Non-လွတ်မြောက်မှုကိုတောင့်သောသူတို့က, အစည်းအဝေး, အတူတကွဖြစ်ခြင်း,
သူတို့ကိုဆုံမိကြသည် ရဟန်းတို့လွဲသည်အဘယ်သို့နှင့်ဆက်စပ်လျှက်၏ဆငျးရဲဒုက်ခ, နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ
Bliss များအတွက် (Ultimate Goal) ၏ချုပ်ရာ (ထို dukkha ဟုခေါ်သည်။
(ထိုပုံစံများသကဲ့သို့, ဤတွင်? နှငျ့ညီညှတျသောအရာကိုမှ dissociated
ခံရဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal), အသံ,
မအတူတကွဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, နှစ်သက်စေပျော်စရာ, သာယာသော,
ဆက်စပ်မခံရကြသည်မဟုတ်: ဤရဟန်းတို့ထို dukkha နှငျ့ညီညှတျသောအရာကိုမှ dissociated
ခံရဒုက်ခဆငျးရဲ, နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal) ၏
dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, သတ္တဝါထဲမှာတယောက်လိုရတဲ့မနိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss
ဘို့ Ultimate Goal), ရဟန်းတို့ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာ:?
“oh တကယ် may မွေးဖွားခြင်း
(မျိုး, ကြင်နာ, အမျိုးမျိုး;
အသစ်တဖန်ဖြစ်တည်မှု; နွယ်, မိသားစုဇာတ်မွေးဖွားခြင်း) ရှိjātiမဖြစ်, တစ်ဦးကလေးမွေးဖွားသို့မဟုတ်ဖြစ်တည်မှုဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရ,
re-ဖွားမြင်, အသစ်တဖန်တည်ရှိမှုအတွက်; နွယ်, မိသားစုဇာတ်, ။ ။ မျိုး,
ကြင်နာ, အမျိုးမျိုး) “ဒါပေမဲ့ဒီလိုသဖြင့်အောင်မြင်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါက
dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပါသည် တဦးတည်းလိုရတဲ့မ (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal) ။
“oh ကယ့်ကို, ငါတို့အဘို့ (အဟောငျးအသက်, decrepitude, ပျက်စီးယိုယွင်း)
ရှိjarāမရစေခြင်းငှါ, တကယ်, ကျနော်တို့ (jarāမှအိုအသက်အရွယ်မလာစေခြင်းငှါ decrepitude, ပျက်စီးယိုယွင်း) ။ ” သို့သော်ဤလိုအားဖြင့်အောင်မြင်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတခေငျြတယျဆိုတော့မ၏ dukkha ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ (ရပ်နားခြင်း, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal) ဖြစ်ပါသည်။
“oh ကယ့်ကို, ငါတို့အဘို့အနာရောဂါမျှမရှိစေခြင်းငှါ,
နှင့်အမှန်တကယ်ကျနော်တို့အနာရောဂါမှမလာပေမည်။ ” သို့သော်ဤလိုအားဖြင့်အောင်မြင်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတခေငျြတယျဆိုတော့မ၏ dukkha ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ (ရပ်နားခြင်း, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal) ဖြစ်ပါသည်။
“oh ကယ့်ကို, ငါတို့အဘို့maraṇa (သေခြင်းတရားသဆေုံးခွငျး)
ရှိမဖြစ်စေခြင်းငှါ, တကယ်, ကျနော်တို့ (သေခြင်းတရားသဆေုံးခွငျး)
maraṇaမှမလာပေမည်။ ” သို့သော်ဤလိုအားဖြင့်အောင်မြင်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတခေငျြတယျဆိုတော့မ၏ dukkha ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ (ရပ်နားခြင်း, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate Goal) ဖြစ်ပါသည်။
မြည်တမ်းခြင်းကို, dukkha ဆငျးရဲဒုက်ခ, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့
Ultimate Goal), domanassa နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယု၏ (ချုပ်ရာအတွက်,
ထိုကဲ့သို့သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာ: “oh တကယ်ဝမ်းနည်းခြင်း, မြည်တမ်းခြင်းကို,
dukkha မျှမရှိစေခြင်းငှါ ဆငျးရဲဒုက်ခ,
နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss များအတွက် (Ultimate Goal) ၏ (ရပ်နားခြင်း,
domanassa (စိတ်ပျက်အားငယ်မှောင်, Melancholie)
မြည်တမ်းခြင်းကို, dukkha (ဒုက္ခ၏ချုပ်ရာ, နိဗ္ဗာန်ကို (Ultimate Goal
များအတွက် ထာဝရ Bliss), domanassa (စိတ်ပျက်အားငယ်မှောင်, Melancholie)
နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ။ “ဒါပေမယ့်ဒီလိုသဖြင့်အောင်မြင်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက
dukkha ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ (ရပ်နားခြင်း, နိဗ္ဗာန်ကို (ထာဝရ Bliss ဘို့ Ultimate
ထိုအခါရဟန်းတို့တိုတိုအတွင်းငါးupādānakkhandhas (; ဖြစ်တည်မှုဖက်တွယ်, ကို attachment ထင်း, လောင်စာ) ဘာတွေလုပ်နေလဲ? သူတို့ဟာဖြစ်ကြသည်:
အrūpa (Form ကို, ပုံ, အသွင်သဏ္ဌာန်, ပုံရိပ်, ကိုယ်စားပြုမှု;
ကိုယျခန်ဓာ; ဂရမ်ထဲမှာနှုတ်သို့မဟုတ်အမည်ခံပုံစံကို; အလှတရား;
သဘာဝအလျောက်ပြည်နယ်; ဝိသေသ။ ) upādānakkhandha (ထင်း, လောင်စာ,
တည်ရှိမှုဖက်တွယ်, ပူးတွဲမှု), အvedanā (Feeling,
အလွင်ပင်အရသာ, သညာ, နာကျင်မှု, ခံစားနေရပြီး) upādānakkhandha (ထင်း,
လောင်စာ, တည်ရှိမှုဖက်တွယ်, ပူးတွဲမှု), အsaññā (Sense သည်, ဝိညာဏ်, သညာ,
ဉာဏ်, အတွေး, နိမိတ်လက္ခဏာ, အမူအယာ; အမည်) upādānakkhandha (ထင်း, လောင်စာ,
ပူးတွဲမှု), အsaṅkhāra (တည်ဆောက်ခြင်းပြင်ဆင်နေ, ပြည့်စုံ, embellishing;
သတင်းအချက်အလက်စုစည်းခြင်း; ကိစ္စ, ကံ၏၏ skandhas) upādānakkhandha (ထင်း,
လောင်စာ, တည်ရှိမှုဖက်တွယ်, ပူးတွဲမှု), အviññāṇa (ထောက်လှမ်းရေး, အသိပညာ,
ဝိညာဏ်, အတွေး, စိတ်ကို) upādānakkhandha (ထင်း, လောင်စာ, တည်ရှိမှုဖက်တွယ်, ပူးတွဲမှု) ။ ဤရွေ့ကားတိုတောင်းသောရဟန်းတို့ငါးပါးupādānakkhandhas (; ဖြစ်တည်မှုဖက်တွယ်, ကို attachment ထင်း, လောင်စာ) တွင်ဟုခေါ်ကြသည်။
ဤရဟန်းတို့ထို dukkha ariyasacca (ဆငျးရဲဒုက်ခ, နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရ Bliss
များအတွက် (Ultimate Goal)
RATANA သုတ် (1/4) ရဟန်းဗောဓိသဖြင့်တရားဓမ္မကထိက -1: 52: 09
နိုဝင်ဘာ 22, 2012 တွင်ထုတ်ဝေသည်
တရားဓမ္မကထိက, ရဟန်း BodhiBio အားဖြင့် RATANA သုတ် 1: ရဟန်းဗောဓိ 1944. အတွက်နယူးယောက်စီးတီးမှာမွေးဖွားခဲ့သူတစ်ဦး B.A. လက်ခံရရှိ ဘရွတ်ကလင်းကောလိပ် (1966) နှင့်တစ်ဦး Ph.D ဘွဲ့ကိုမှဒဿနိကဗေဒထဲမှာ Claremont ဘွဲ့လွန်ကျောင်း (1972) ကနေဒဿနိကဗေဒထဲမှာ။ နှောင်းပိုင်းတွင်
ထံသို့သွားလေ၏။ Balangoda အာနန္ဒာ Maitreya Mahanayaka မထေရ်။ 1984
ခုနှစ်ကတည်းကသူ Kandy အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူများသိရှိစေရန်ထုတ်ပြန်ကြေ
Society ၏အယ်ဒီတာနှင့် 1988 ခုနှစ်ကတည်းက၎င်း၏နိုင်ငံတော်သမ္မတခဲ့သည်။ သူကစာရေးဆရာ, ဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အများအပြားစာအုပ်တွေအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ http://www.sobhana.net/audio/english/bodhi/index.htm
Tipitaka ဝိနည်း Pitaka သုတ် Pitaka အဘိဓမ္မာ Pitaka
Singaporian ဗုဒ္ဓဘာသာတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မ Talk
ကိုတရားဓမ္မသွန်သင်အဆိုပါသုတျ Mangala သုတ္တန်တရားအားထုတ်သမာဓိဝိပဿနာ Karaniya မေတ္တာသုတ်ပါဠိကို Canon လေး
Noble အမှန်တရားရဟန်းဗောဓိ Thanissaro
ရဟန်းတရားအားထုတ်ဂီတအပန်းဖြေဂီတအကြိုးပွုအကုသိုလ် Karma ကံ Ratana သုတ်
RATANA သုတ် (2/4) ရဟန်းဗောဓိသဖြင့်တရားဓမ္မကထိက - 1:01:27 - တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 2/4
RATANA သုတ် (3​​/4) ရဟန်းဗောဓိသဖြင့်တရားဓမ္မကထိက - 1:03:16 အစိတ်အပိုင်း 3/4
RATANA သုတ် (4/4) ရဟန်းဗောဓိသဖြင့်တရားဓမ္မကထိက - 1:02:13 အစိတ်အပိုင်း 4/4
1961 Fri Aug 19 2016-င2။ Samudayasacca ၏ Exposition
1961 Fri Aug 19 2016 E3 ။ ၏ Exposition
1961 Fri Aug 19 2016-E4 ။ Maggasacca ၏ Exposition
နှင့်အညီ, nirodha ·gāminīpaṭipadā ariyasacca ·အ dukkha ဘာရဟန်းတို့ဖြစ်သနည်း ထိုသို့sammādiṭṭhi, sammāsaṅkappo, sammāvācā, sammākammanto,
sammā-ājīvo, sammāvāyāmo, sammāsatiနှင့်sammāsamādhiပြောဖြစ်ပါတယ်, Magga
aṭṭha​​ṅgikaပဲဒီ ariya ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ရဟန်းတို့sammādiṭṭhiဖြစ်သနည်း dukkha ၏ nana, dukkha-samudaya, dukkha-nirodha
dukkha-nirodha-gāminipaṭipada၏ nana ၏ nana ၏ nana သောရဟန်းတို့။
အဘယ်ရဟန်းတို့sammāsaṅkappasရှိပါသလဲ nekkhamma ၏saṅkappasနေသောသူများသည်, ရဟန်းတို့, abyāpāda၏saṅkappas, avihiṃsā၏saṅkappasအဲဒီဟုခေါ်ကြသည်, ရဟန်းတို့sammāsaṅkappas။
အဘယ်ရဟန်းတို့sammāvācāသလဲ? ရဟန်းတို့ကိုခေါ်ကြောင်း, musāvādāမှရှောင်pisuṇavācāမှရှောင်, pharusa
vācāမှရှောင်နှင့်samphappalāpaမှရှောင်သောအကြောင်း, ရဟန်းတို့, sammāvācā။
အဘယ်ရဟန်းတို့sammā-kammanta ဖြစ်သနည်း အကြောင်း, abrahmacariya မှရှောင်pāṇātipātaမှရှောင်သောရဟန်းတို့, adinnādānaမှရှောင်, သောရဟန်းတို့sammā-kammanta ဟုခေါ်သည်။
အဘယ်ရဟန်းတို့sammā-ājīvaဖြစ်သနည်း ဤတွင်ရဟန်းတို့တစ်ဦးအရိယာတပည့်, မှားယွင်းတဲ့အသက်မွေးမှု abandonned
unarisen pāpakaနှင့် akusala Dhamma ၏ Non-ပေါ်ပေါက်သည်မိမိ chanda
ထုတ်ပေးပြီး, သူ, မိမိကိုမိမိပြုပြင်သည်မိမိ viriya rouses,
ပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်မိမိ citta နှင့်ကျက်စားသက်ဆိုင်; သူသည်မိမိအ
viriya rouses, ပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်မိမိ citta
akusala Dhamma ၏ forsaking သည်မိမိ chanda ထုတ်ပေးပြီး, သူက
unarisen kusala Dhamma ဖြစ်ပေါ်၏အဘို့မိမိအ chanda ထုတ်ပေးပြီး, သူ,
မိမိကိုမိမိပြုပြင်သည်မိမိ viriya rouses, ပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်မိမိ citta
kusala Dhamma ၏ခိုင်ခံ့စွာအဘို့မိမိအ chanda,
မိမိ viriya rouses, ပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်မိမိ citta
အပ်ပြီးလျှင်, ātāpīsampajāno, kāyaအတွက်satimākāyaလေ့လာကျိန်းဝပ်။ သူသည်ātāpīsampajāno, vedanāအတွက်vedanāလေ့လာကျိန်းဝပ်satimā, လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်ဘဲလျက်။ သူသည်ātāpīsampajāno, citta အတွက် citta လေ့လာကျိန်းဝပ်satimā, လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်ဘဲလျက်။ သူဟာ·့တရားအတွက်·့, ātāpīsampajānoတရားစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်, satimā, လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်ဘဲလျက်။ ဤရဟန်းတို့sammāsatiဟုခေါ်သည်။
akusala Dhamma မှ detach လုပ်လိုက်သော Kamas မှ detach
လုပ်လိုက်သောရဟန်းသည်,, ကှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမသနားနှင့် sukha နှင့်အတူ
vitakka နှင့်vicāraနှင့်အတူတကွတည်၏။ vitakka-vicāra၏နေဆဲအတူ,
ဒုတိယjhānaဝင်တော်မူပြီးမှ, သူသမာဓိမှမွေးဖွားသူများကိုသနားနှင့် sukha
နှင့်အတူ vitakka မဟုတ်vicāraမပါဘဲ, အတွင်း tanquilization နှင့်တကွ citta
သူ upekkha, Sato နှင့်sampajāno၌တည်၏, သူ ariyas ဖော်ပြရန်သောkāyaအ sukha
အတွက်တွေ့ကြုံ: ‘[ဤ] sukha
တတိယjhānaဝင်တော်မူပြီးမှ, သူတည်၏ ထိုမြို့၌ရှိသော။ sukha
စွန့်ခွာခြင်းနှင့် dukkha စွန့်ခွာ, somanassa နှင့် domanassa
ယခင်ကပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှ, sukha မဟုတ် dukkha ခြင်းမရှိဘဲ, upekkha နှင့်
sati ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူ, စတုတ္ထjhānaဝင်တော်မူပြီးမှ,
ဒါက dukkha · nirodha ·gāminīpaṭipadā ariyasacca ရဟန်းတို့ဟုခေါ်သည်။
Dhamma အတွက် Dhamma လေ့လာကျိန်းဝပ်, ဒါမှမဟုတ်သူပြင်ပမှ Dhamma အတွက်
Dhamma စောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သူကပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနှင့်ပြင်ပမှ Dhamma
အတွက် Dhamma လေ့လာကျိန်းဝပ်ကျိန်းဝပ်; သူ
Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ samudaya လေ့လာကျိန်းဝပ်,
ဒါမှမဟုတ်သူကနိဗ္ဗာန်သွားဖြစ်ရပ်များ၏ဖြတ်သန်း, ဒါမှမဟုတ်သူက samudaya
အတွက်ဖြစ်ရပ်၏ပရိနိဗ္ဗာန်ကျိန်းဝပ်စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်; သို့မဟုတ်အခြား [သဘောပေါက်:] “ဒီ Dhamma များမှာ!” sati
ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘာမှမှတွယ်ကပ်မထားဘူး, သခင်၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည်လေးပါး ariya ရည်ညွှန်း·သစ္စာနှင့်အတူ Dhamma အတွက် Dhamma လေ့လာကျိန်းဝပ်။
1961 Fri Aug 19 2016 -Satipatthana သုတ် (စိတ်ကို၏ဖောင်ဒေးရှင်းအပေါ်သုတ်)-Tipitaka in Myanmar Language -မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်
Satipatthana သုတ် (စိတ်ကို၏ဖောင်ဒေးရှင်းအပေါ်သုတ်)-Tipitaka in Myanmar Language -မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်
Satipatthana သုတ် (စိတ်ကို၏ဖောင်ဒေးရှင်းအပေါ်သုတ်)
မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
ခုနစ်နှစ်ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
ခြောက်နှစ်ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
ငါးနှစ်ကြာရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
လေးနှစ်ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
[စုံလင်သော] တစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်ကျန်ရစ်တချို့စွဲလမ်းမှု,
တယောက်တည်းတစ်နှစ်ရဟန်းတို့စို့။ ကျန်ရစ်တချို့စွဲလမ်းမှု, anāgāmitaရှိလျှင်မြင်နိုင်ဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ
[စုံလင်သော] တစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်: မည်သူမဆိုရဟန်းတို့အဘို့, ခုနစ်လ,
ခုနစ်လ, ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
ငါးလ, ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
လေးလ, ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ အကြင်သူသည်ရဟန်းတို့အဘို့,
သုံးလ, ရဟန်းတို့တယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
တယောက်တည်းတစ်လရဟန်းတို့စို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
ရဟန်းတို့တဝက်တစ်လတယောက်တည်းပါစို့။ မြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အသိပညာ [စုံလင်သော] တစ်ခုခု,
၏ပျောက်ဆုံးမှု, နည်းမှန်လမ်းမှန်ရဲ့ဆည်း, နိဗ္ဗာန်ကို၏နားလည်,
ထိုလေးပါးကိုပွောဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ် satipaṭṭhānas။ ” ထိုသို့ပြောပါတယ်ခဲ့ပြီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဒီအခြေခံပေါ်မှာကပြောသည်သိရသည်။
အရှင်Bhagavāစကားပြောခဲ့သည်။ ဝမ်းသာခြင်း, ရဟန်းတို့ထိုBhagavā၏စကားကကြိုဆိုခဲ့သည်။
Tipitaka and the paracanonical Pali texts (commentaries, chronicles,
etc.) together constitute the complete body of classical Theravada
The Pali Canon isavast body of literature: in English
translation the texts add up to thousands of printed pages. Most (but
not all) of the Canon has already been published in English over the
years. Although onlyasmall fraction of these texts are available on
this website, this collection can beagood place to start.
Vinaya Pitaka (in Myanmar Language)
providingadetailed account of the Buddha’s solution to the question
of how to maintain communal harmony withinalarge and diverse
The “Long” Discourses (Pali digha = “long”)
consists of 34 suttas, including the longest ones in the Canon. The
subject matter of these suttas ranges widely, from colorful folkloric
accounts of the beings inhabiting the deva worlds to down-to-earth
practical meditation instructions, and everything in between. Recent
scholarship suggests thatadistinguishing trait of the Digha Nikaya
may be that it was “intended for the purpose of propaganda, to attract
converts to the new religion.”
Silakkhandha-vagga — The Division Concerning Morality (13 suttas)
Maha-vagga — The Large Division (10 suttas)
Patika-vagga — The Patika Division (11 suttas)
The “Middle-length” Discourses (Pali majjhima =
“middle”) consists of 152 suttas of varying length. These range from
some of the most profound and difficult suttas in the Canon to engaging
stories full of human pathos and drama that illustrate important
principles of the law of kamma.
Khuddaka Nikaya 1 — the “collection of little texts”:
Khuddaka Nikaya 2— the “collection of little texts”:
Petakopadesa ( ” included only in the Burmese edition of the Tipitaka ” )
Milindapañha ( “included only in the Burmese edition of the Tipitaka ” )
ဓမ္မ Web ကို
သတင်း / ထင်မြင်ချက်
Tipitaka (ပါဠိ ti, “သုံး” + pitaka “ခြင်းတောင်း”), သို့မဟုတ်ပါဠိကို
အဆိုပါ Tipitaka နှင့် paracanonical ပါဠိကျမ်း (စသည်တို့ကိုဝေဖန်, ရာဇဝငျ,) အတူတူဂန္ထေရဝါဒကျမ်း၏ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာပါဝင်သည်။
ပါဠိကို Canon စာပေ၏ကျယ်ပြန့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်: အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်အတွက်ကျမ်းပုံနှိပ်စာမျက်နှာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏အထိထည့်ပါ။ အများစုမှာ (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်) ကို Canon ၏ပြီးသားနှစ်ပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ဝေသောသိရသည်။ ဤအခကျြမြားကိုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဒီ website မှာရရှိနိုင်ကြပေမဲ့, ဒီစုဆောင်းမှုကိုစတင်နေရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
အ Tipitaka ၏သုံးသင်းဖွဲ့နေသောခေါင်းစဉ်:
(မြန်မာဘာသာစကားကိုအတွက်) ဝိနည်း Pitaka
- ထိုရဟန်းတို့၏အသိုင်းအဝိုင်း (စီရင်ဘုန်းကြီးတွေ) နှင့် bhikkhunis
(စီရင်သီလရှင်များ) ။ စည်းမျဉ်းများမျှသာစာရင်းတစ်ခုထက် ပို. ခြင်း, ဝိနည်း Pitaka
အဆိုပါ “Long က” သုတ် (ပါဠိ digha = “ရှည်လျား”) ကို Canon ထဲတွင်အကြာဆုံးသူမြားအပါအဝငျ 34 သုတ်, ပါဝင်ပါသည်။ ဤအသုတ်၏ဘာသာရပ်ကိစ္စရောင်စုံ
မှစ. , ကျယ်ပြန့်လာနေကြပါတယ်။ မကြာမီကပညာသင်ဆုအ Digha Nikaya
Silakkhandha-vagga - ငျြ့တရား (13 သုတ်) ကိုရည်မှတ်အဆိုပါဌာနခွဲ
မဟာ-vagga - အအကြီးစားတိုင်း (10 သုတ်)
Patika-vagga - အ Patika ဌာနခွဲ (11 သုတ်)
အဆိုပါ “အလယျပိုငျး-အရှည်” သုတ် (ပါဠိ majjhima = “အလယ်”) အမျိုးမျိုးအရှည်၏ 152 သုတ်ပါဝင်ပါသည်။ ကို Canon
Samyutta Nikaya - “အအုပ်စုဖွဲ့စုဆောင်းခြင်း”
အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် Nikaya - ကို “နောက်ထပ်-factor စုဆောင်းခြင်း”
Khuddaka Nikaya 1 - “အနညျးငယျခကျြမြား၏စုဆောင်းမှု”:
Khuddaka Nikaya 2- က “နည်းနည်းကျမ်း၏စုဆောင်းမှု”:
Nettippakarana (သာ Tipitaka ၏မြန်မာ edition အတွက်ပါဝင်)
Petakopadesa ( “ကိုသာ Tipitaka ၏မြန်မာ edition အတွက်ပါဝင်”)
Milindapañha ( “ကိုသာ Tipitaka ၏မြန်မာ edition အတွက်ပါဝင်”)
Imee Ooi - The Chant of Metta with Pali Lyrics, Pronounciation and English Translation
Video by K. Dianne Stephens on Youtube
Imee Ooi - ပါဠိ Lyrics, Pronounciation နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အတူမေတ္တာ၏ဓမ္မသီချင်း
Youtube ကိုအပေါ် K. Dianne Stephens အားဖြင့်ဗီဒီယို